Uhlobo olutsha lwe-COVID-19 lwe-Omicron luse-UK, eBelgium, eJamani, eNetherlands naseCzech Republic ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Uhlobo olutsha lwe-COVID-19 lwe-Omicron luse-UK, eBelgium, eJamani, eNetherlands naseCzech Republic ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-United Kingdom ibhalise iimeko zayo ezimbini zokuqala zokwahluka kwe-Omicron entsha ye-COVID-19 ngosuku emva kwetyala lokuqala loxinzelelo, apho oososayensi bakrokrela ukuba inokosulela ngakumbi, yarekhodwa eYurophu.
Namhlanje, isithethi soMphathiswa wezeMpilo e-Czech ubhengeze ukuba ibhinqa elibuya ekhefini e-Egypt liye lavavanywa ukuba linayo into ekukholelwa ukuba yeyona nto yahlukileyo ye-COVID-19. Wongeze ukuba isampuli iqhutyelwa phambili, kunye nokuqinisekiswa okusemthethweni kulindeleke ngeCawa kusasa.
Amagunya aseBelgium naseJamani aqinisekisa ngokusemthethweni ukuza kuka-Omicron kwilizwekazi laseYurophu.
Ngokuhambelana naloo ngxelo evela kwiRiphabhlikhi yaseCzech, uKai Klose, umphathiswa wemicimbi yezentlalo kunye nokudityaniswa Jemani Ingingqi ye-Hesse, yathumela i-tweet ukuba "i-Omicron eyahlukileyo, ngeqondo eliphezulu kakhulu, sele ifikile eJamani." UKlose udize ukuba “iinguqu ezininzi ze-Omicron zifunyenwe kumntu osuka eMzantsi Afrika” ngoLwesihlanu ebusuku. Umntu wabekwa kwindawo evalelwe yedwa elindele ulandelelwano olupheleleyo lwentsholongwane efunyenwe kwisampulu yakhe.
Abasemagunyeni eNetherlands bebejongene nenani elikhulu lamatyala e-Omicron ekurhanelwa ukuba ngolwe-Sihlanu, xa abantu abangama-61 bafika e-Amsterdam bevela eMzantsi Afrika bavavanywa bene-COVID-19. Abahambi bathatyathwa kwisikhululo seenqwelomoya basiwa kwihotele ekufutshane baza babekwa bodwa apho. Umphathiswa wezempilo waseDatshi uthe iisampulu ziyaphononongwa "ngokukhawuleza kangangoko [ukubona] ukuba ngaba luhlobo olutsha lwenkxalabo, ngoku ebizwa ngokuba 'yi-Omicron'."
Kwangoko ngolo suku, urhulumente waseDatshi wakuvala konke ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka eMzantsi Afrika apho olu hlobo lutsha lwaqala ukubhaqwa khona. Abakhweli kwiinqwelomoya ezimbini zokugqibela ezisuka apho kwafuneka bachithe iiyure kumgaqo weenqwelo-moya, belindele ukuvavanywa.
IBelgium inomahluko othandabuzekayo wokuba lilizwe lokuqala eYurophu ukungqina ngokusemthethweni ityala le-Omicron. Umphathiswa wezempilo welizwe, uFrank Vandenbroucke, ubhengeze ngolwesine ukuba isigulana esosulelekileyo ngumntu ongagonywanga oye wavavanywa wafunyanwa ene-COVID-19 ngoNovemba 22. Ngokukagqirha oyintloko waseBelgium, uMark Van Ranst, umenzi weholide wayebuyile eYiputa.
Izolo, i IZiko laseYurophu loThintelo noLawulo lweZifo (ECDC) Ulumkise ukuba kusekho “ukungaqiniseki okubonakalayo okunxulumene nokusulela, ukusebenza kogonyo, umngcipheko wokosuleleka kwakhona kunye nezinye iipropathi zokwahluka kwe-Omicron.” Abasemagunyeni kwezempilo be-EU balubeke olu hlobo loxinzelelo njengomngcipheko "ophezulu ukuya phezulu kakhulu".
Kwangaloo mini inye, onke amazwe angamalungu e-EU angama-27 avuma ukunqumamisa okwethutyana ukuhamba ngenqwelomoya evela kumazwe asixhenxe akumazantsi eAfrika. I-UK, i-US kunye neCanada nazo zibeke izithintelo ezifanayo.